လူတစ်ယောက်ကို အဆိုးရွားဆုံး လွမ်းဆွတ်ရခြင်းဟာ သူ့ဘေးမှာထိုင်နေရင်းနဲ့ သူ့ကိုဘယ်တော့မှ မပိုင်ဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိနေခြင်းပါပဲ....
ကျွန်တော့် ဘလော့လေး ကိုလာလည်တဲ့ မိတ်ဆွေ အားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ....
ရေးသားသူ နေဇော် လင်း at 1:20 AM0comments
Labels: မလေးရှား, သတင်း
အသစ်တင်တိုင်း မေးလ်ပို့ပေးပါမည် . သင့် Email လိပ်စာသာ ထားခဲ့ပေးပါ:
*** ဆရာမျိုးဟန်ကို ***
လစဉ်ဗေဒင် ဟောစ တမ်းများ
ဒီ မှာ ပါ။
IT အတွက် လေ့လာရန်ဆိုက်များ
~ PLANET ဖိုရမ်
~ ICT Reder
~ Myanmar IT Men
~ MYSTERY ZILLION
Blog Archive May 31 (7) Jun 01 (2) Jun 03 (3) Jun 07 (1) Jun 13 (3) Jun 16 (3) Jun 19 (1) Jun 23 (1) Jun 26 (1) Jun 29 (2) Jul 01 (1) Jul 02 (1) Jul 06 (2) Jul 11 (1) Jul 15 (1) Jul 16 (1) Jul 22 (1) Jul 27 (1) Aug 05 (2) Aug 15 (1) Aug 21 (2) Aug 22 (1) Aug 28 (1) Aug 29 (1) Sep 11 (1) Sep 12 (2) Sep 15 (1) Sep 16 (1) Sep 17 (1) Sep 30 (1) Oct 26 (1) Nov 07 (1) Nov 10 (1) Dec 03 (1) Dec 28 (1) Jan 28 (1) Feb 06 (1) Mar 20 (1) Jul 14 (1) Jul 30 (1) Sep 25 (1) Nov 26 (1) Dec 02 (2) Feb 06 (1) Jun 01 (1)
WILLIAM HILL BINGO | Counter | Pokerstars Review | Highroller | Video poker strategy
English-Myanmar နှစ်တရာပြက္ခဒိန်လေးပါ ဘယ်သူရေးထားတဲ့ ဆော့ဝဲလေးတော့မသိတော့ဘူးဗျ အခုမှပြန်ရှာတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်...
Get the Visitor IP Address City widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeingawidget? (More info)
Copyright 2010 - ငြိမ်းချမ်းကို